५६ बर्षपछि जन्मथलो खोज्दै गुल्मी पुगेर के के गरे गृहमन्त्री थापाले? – Gulminews
Home/समाचार/५६ बर्षपछि जन्मथलो खोज्दै गुल्मी पुगेर के के गरे गृहमन्त्री थापाले?
५६ बर्षपछि जन्मथलो खोज्दै गुल्मी पुगेर के के गरे गृहमन्त्री थापाले?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ आश्विन १३, शनिबार १९:१३ मा प्रकाशित
गुल्मी, असौज १३ । ५६ बर्षपछि नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा धर्मपत्नी नैनीकला थापासहित जन्मथलो फर्किएका छन् । थापा शनिबार विहान साढे ८ बजे आफ्नो जन्मथलो मुसिकोट नगरपालिका ३ वडागाउँ तल्लो दजाकोट पुगेका थिए ।
भेटमा उनले आफ्ना दाजुभाई, परिवारका सदस्य तथा आफन्तसंग भेटघाट गरि माया र आत्मियता साटेको मन्त्रीका छिमेकी तथा समाजसेवी हरि छन्तेलले बताए ।
करिव ४५ मिनेट बिताएका उनले आफुले पढेको पशुपति निमावि, गाउँ र बाल्कालको स्मरण गरेका थिए । सोहि अवसरमा मुसिकोट नगरपालिकाले थापालाई स्वागत गरेको थियो । अभिनन्दनपछि बोल्दै मन्त्री थापाले मुसिकोटमा इलाका प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने र खानेपानीको समस्या समाधान गर्न पुर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । उनले गाउँको भेटघाटलाई निरन्तरता दिने समेत बताए ।
शनिबार नै नेकपाको पार्टी कार्यालयमा पुगेर मन्त्री थापाले जीवराज आश्रितको तस्विरमा माल्र्यापण तथा कार्यकर्ता भेटघाट गरेका थिए ।